ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း. Show all posts
Bring Back Start Menu To Windows 8
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, January 03, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ လမ်းညွှန်, ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, December 28, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ System, ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း
Driver Checker အကြောင်း
Driver Checker ဟာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် ထည့်သွင်းထားဖို့လိုအပ်တဲ့
ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ Driver Checker ဟာ စက်တစ်လုံးရဲ့ Driver
တွေကို စစ်ဆေးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်း Update ပြုလုပ်
Driver တွေမှန်ကန် Update ဖြစ်နေမှသာလျှင် ကောင်းမွန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့စက်တစ်လုံး
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် Driver တွေဟာများစွာရှိပါတယ်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, December 11, 2012 No comments:
Torrent File ဆိုတာဘာလဲ ? ဘယလိုသုံးမလဲ...!
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, November 29, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ နည်းပညာ, လမ်းညွှန်, ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း